Eny amin’ny tobim-piantsonana Andohotapenaka no hakana izany nanomboka omaly alatsinainy izay efa nahitana filaharam-be tokoa. Ho an’ireo manao fangatahana ho an’ny fiara hitondra olona hody amin’ny faritra dia efa misy dika mitovy amin’ ilay taratasy fangatahana fenoana eny an-toerana na ao amin’ny pejin’ny ATT. Ankoatra izay dia mila ny « carte grise » ary ny dika mitovy amin’ny taratasy fahazoan-dalàna mamily (permis de conduire) izany ho an’ny mpamily. Ho an’ireo olona mangataka ny hody amin’ny faritra indray dia mila maka ilay taratasy fangatahana eny amin’ny tobim-piantsonana Andohatapenaka izy ireo na ao amin’ny pejin’ny ATT ary mameno izany . Raha ny mikasika ireo avy any amin’ny faritra hiditra eto amin’ny Faritra Analamanga kosa dia mila manatona ireo tompon’andraikitry ny CCO COVID-19 any amin’ny toerana misy azy avokoa izy ireo maka izany fahazoan-dalàna izany. Tsiahivina moa fa anio Talata hatramin’ny Alakamisy ihany no hisian’izay fiara fitaterana izay, araka ny kabarin’ny filoha.